Afro-Arzantina, famonoana olona efa hadino? - Foundation Afrikhepri
Afro-Argentiniana, hadino ve ny famonoan'olona?
Lizy ny ankamaroan'ny firenena eropeana ao Amerika Latina dia manafina ny fiandohany afrikanina. Androany, 200 taona taorian'ny nananganana azy, miatrika ny fampidirana kilasy an-jorom-baravarana sy ny fanitsiana ny kabary tokana sy eropeanina izy.
Ririnina ao Buenos Aires ary ny toetr'andro mangatsiaka dia miala ao amin'ny Río de la Plata. Parc Patricios, distrika iray ahitana trano ambany ambany sy toeram-pandraharahana indostrialy efa nopotehina, dia nopotehin'ny zavona matevina. Mandeha manerana ny làlana Monteaguado isika, manaloka ny valan-javaboary izay mamelatra ny penina ao amin'ny distrika. Alakamisy alina, efa lavo ny alina.
Mirehitra sy mamboly hazo avo be, eo afovoan-jaridaina no ahitantsika koveta mamirifiry izay mamelombelona ny tanora mipetraka eny an-dalambe. Mamboly lakaoly, fofona coca ny setroka, maneho ny zava-misy mampalahelo ny fanavakavahana ara-tsosialy, vokatry ny krizy marobe izay nanozongozona an'i Arzantina. More ara-tsaina resaka ny vaovao karazana famonoana ny mpiray tanindrazana, satria ny fahantrana ao amin'ny firenena izay mamokatra sakafo ho an'ny kokoa 300 tapitrisa, dia tsy azo ihodivirana.
Tonga eo amin'ny Avenue Caseros izahay ary miandry bus n ° 28, akaikin'ny hopitaly Churruca. Ny mifanohitra amin'izany dia manangana tsangambato iray izay mahatadidy ny faran'ny valanaretina iray, ny faran'ny fandripahana hafa. Zato taona lasa izay no nitrangan'izany ary namongotra ny mponina Afro-Arzantina. Ny firenena "eropeana" be indrindra tany Amerika Latina dia nanana mponina afrikanina somary maro hatramin'ny faran'ny taonjato faha-19. Amin'ny maha-seranan-tsambo fidirana hatramin'ny fotoanan'ny Viceroyalty dia toerana fivarotana sy fanondranana an-tsokosoko i Buenos Aires. Ny vola sy ny fanandevozana dia niely tao amin'ny tanàna tsy fantatra izay toa tsy dia misy itovizany amin'ilay tanàna ankehitriny.
Asehon'ireo rakitsoratra fa nandritra ny taona 1600, ny voalohany tamin'ireo Afrikana dia nanao ny lahateniny tao Buenos Aires. Tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-18, ny mainty hoditra dia ny ankamaroan'ny faritany any ambanivohitra, toa an'i Santiago del Estero na Tucumán.
Inona no nitranga ka nanjavona io fiarahamonina io tao anatin'ny fotoana fohy? Ireo manam-pahaizana dia miresaka momba ny fitambaran'ireo trangan-javatra mahafaty: ady marobe, politika marevaka ary ny fihanaky ny tazo mavo sy ny kolera matetika.
Tokony ho tsaroan'i fa nanomboka tamin'ny ady ny fahaleovan-tena, fampielezan-kevitra an-efitra sy ny mpandatsa-drà ady ny Paraguay, ny mainty hoditra no anisan'ny voalohany toerana, dia tena tafondro vilona. Fa ny vadiny sy ny zanany mbola afaka, satria ny fototry ny maha miscegenation miafina Arzantina ", hoy ny mpamokatra sarimihetsika David Rubio, mpanoratra ny" Defensa 1464 "fanadihadiana mahaliana izay maneho ny Afro-Arzantina ny zava-misy omaly sy amin'izao fotoana izao.
Ny politikan'ny fanodinkodinana volavolan-dalàmpanorenana rehetra izay nipoitra nandritra ny taonjato fahasivy ambin'ny folo teo anivon'ireo eletran'ny Creole manerana an'i Amerika Latina dia ny ankamaroan'ny mpifindra monina Eoropeana. Noho izany, ny fiaraha-monina, any 1810, niforona ny 30% ny mponina ao Buenos Aires dia voafetra ny 0,3% tamin'ny faran'ny taonjato ", hoy i Rubio. Ny lahateny manan-danja dia lasa bitika kely.
Ao amin'ny 1871, i Buenos Aires dia tsy nanana fepetra ara-pahasalamana fototra. Ny areti-maso mavo tazo dia nahatsiravina ny Afro-Argentiniana, izay voafetra sy nilaozan'ny fandroahana azo antoka.
Taorian'ny ny valan'aretina, tanàna vaovao indray araka ny endrik'Andriamanitra tanàna Eoropeana, raha ny Afrikana ao amin 'ny Arzantina fiavaham-pirenena latsaka tao hadino. Fa raha mihaino tsara ny feon'ny ny fotoana, hitantsika-drehetra mifandray ara-kolontsaina izay maneho izao zava-misy: ny fitondran candombe rioplatense, ny teny hoe "Quilombo" na Tango, izay manana fiaviana Afrikana toa, dia tsy manao afa ohatra sasantsasany. Na dia ny fiteny: Arzantina denominate, patronize ny mahantra velona amin'ny fahoriana tanàna - fokontany mahantra - "an'ireo Mainty Hoditra", na raha ny marina efa masaka.
Nihena ny toerany ny kolontsaina Afro-Arzantina ho an'ny folklorika tsotra na ny hexogen amin'ny maha-olom-pirenena azy. Ny fiara fitateram-bahoaka tonga, dia handao ny toerana isika dia mitodika ny lasa ary tsarovy ny misy kely, ny tsangambato, nisokatra ny fasana faobe, izay mahatsiaro ny niharam-boina an'arivony adino izany Arzantina lehibe hafa fandripahana foko.
Asa amin'ny vehivavy Afrikana eo amin'ny fiarahamonina
Enseignement sur vipassana (PDF)
Fanafody voajanahary ho an'ny fery maloto, fanaintainana sy bronchitis
Mampahory antsika ve ny sakafo indostrialy? (Video)
Fantaro ny tena toetran'ny saintsika